Hetsika Mitsangana ry Malagasy : « Miala ny filoha, avereno amin’ny vahoaka ny fahefana… » | NewsMada
Hetsika Mitsangana ry Malagasy : « Miala ny filoha, avereno amin’ny vahoaka ny fahefana… »
Hentitra ny lahateny nifandimbiasan’ny avy amin’ny Mitsangana ry Malagasy tetsy Andrefan’Ambohijanahary ny asabotsy. Takin’izy ireo ny hialan’ny filoham-pirenena sy ny hirosoana amin’ny fifidianana mialoha ny fotoana.
« Mialà amin’izay fa ampy ny roa taona tapany… Tokony hahatsapa tena rehefa tsy mahavita ary mamerina ny fahefana amin’ny vahoaka, mba tsy ho tonga amin’ny korontana ny firenena », hoy ny lahatenin’ny filoha nasionalin’ny Malagasy miara-miaiga, Andrianainarivelo Hajo. Nohamafisiny fa tsy mandeha amin’ny laoniny intsony ny raharaham-pirenena ka tokony hahatsiaro tena ny mpitondra. « Hiandrasana ny taona 2018 ve izao ? Nahoana no hiandry izany ny malagasy ? Tsy azo sakanana intsony ny vahoaka fa efa noana sy mahantra… Tsy misy ampitahorina izany eto », hoy ihany izy. Nambarany fa hirosoana haingana ny fifidianana malalaka sy mangarahara mialoha ny fotoana. Ilaina izany mba hanamarinam-pototra ny lanjan’ny antoko politika tsirairay, araka ny fanambarana. Mampitandrina ny mpitondra koa ny Mitsangana ry Malagasy manoloana izao raharaham-pirenena izao satria efa mihenjana ny tady.
Nialoha izany, samy nandahan-teny ny amin’ny tokony hialan’ny mpitondra sy ny hirosoana amin’ny fifidianana ireo nandray fitenenana. « Tsy mahay mitantana sady tsy manana vina ny mpitondra. Mitohy ny fanondranana an-tsokosoko ny harem-pirenena, lasan’ny vahiny ny tany, tantely afa-drakotra ny harem-pirenena… », hoy Rabetsaroana Sylvain. Niantso fampitambaran-kery eo amin’ireo antoko sy fikambanana politika ary sendikà kosa i Maharavo na i Doudou avy amin’ny Dinika ho fanavotam-pirenena. Nanamafy izany koa ny AFP, miara-dia amin-dRazafimanantany Faniry.
Hitohy amin’ny asabotsy ny hetsika
Ho an’ny praiminisitra teo aloha, Beriziky kosa, nambarany fa nivadika amin’ny vahoaka ny mpitondra. « Tsy zaka intsony ny fahantrana noho ny hetraketraky ny mpitondra. Nanao fampanantenana poakaty ary nivadi-belirano », hoy izy. Nitondra sosokevitra anefa ny tenany ka nilaza fa hanorina fanjakana matanjaka sy mafy orina, anjakan’ny rariny sy ny hitsiny. « Ilaina koa ny olona vonona hampanaja lalàna sy ny tsy hisian’ny tsimatimanota… tsy mendrika ny safidy nomena azy ny mpitondra ka mialà… Mitsangana isika hiaro ny tanindrazana », hoy ihany izy. Nitodika amin’ny mpitandro filaminana ny tenany avy eo mba tsy hanaiky atao hery famoretana. « Matoky izahay fa manana fahendrena ianareo… Ny mpitondra ihany no mamorona ny savorovoro eto amin’ny tsy fanajana lalàna velona », hoy ihany ity praiminisitra teo aloha ity.
Samy nahatonga solontena avokoa ary nitatitra ny tranga iainany ireo avy any amin’ny faritra : Soamahamanina, Ambalakirajy Mandritsara, Vohilava Mananjary kosa niditra an-telefaonina raha nandahan-teny ireo solontena hafa avy any Antsiranana, Mahajanga, Fianarantsoa.
Hitohy amin’ny asabotsy indray ny hetsika eo anivon’ny Mitsangana ry Malagasy ary manentana ny rehetra ho tonga maro hatrany.